Soomaaliya oo dhalleecaysay qafaalashada haweenay Faransiis ah iyo Kenya oo ka fakaraysa jawaabta munaasibka ah. – Radio Daljir
Soomaaliya oo dhalleecaysay qafaalashada haweenay Faransiis ah iyo Kenya oo ka fakaraysa jawaabta munaasibka ah.
Nairobi, Oct 02 – Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa si kulul u dhalleecaysay weerarkii shalay lagu af-duubtay haweenay u dhalatay dalka Faransiiska, iyada oo dawladda Kenyana sheegtay in ayan meesha ka saarayn tallaabo millatari.
Haweenaydan oo ah qof da? ah ayaa laga qafaashay deegaan loo dalxiis tago oo ku yaalla Kenya una dhaw xadka uu la wadaago Soomaaliya.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamed Cali Ameeriko oo maanta waraysi af-duubka haweenaydaas la xiriira siiyey Radio Daljir ayaa sheegay in ay aad uga xun yihiin dhacdadaan ayna cambaaraynayaan raggii falkaasi gaystay oo la rumaysan yahay in ay ahaayeen burcad-badeed Soomaali ah.
?Tani ma ahan mid ku wanaagsan islaannimada iyo bani?aadannimada toona, waana wax laga xumaado in la af-duubto haweenay da?ah oo xanuunsan, misna curyaan ah? ayuu yiri danjire Maxamed Cali Ameerika.
Safiirku, waxaa uu sheegay dawladaha Kenya iyo Faransiiskuba in ay xiriirro kala duwan la soo sameeyeen saafarrada Soomaaliya ee Kenya ayna ka wadahadleen arrimo badan oo la xiriira af-duubka haweenaydaasi iyo suurtagalnimada gacan ku soo dhiggidda qoftaas dumar ah ee u dhaltay faransiiska.
Danjire Maxamed Cali Ameeriko, waxaa uu Radio Daljir u sheegay in uu haatan socdo qorshayaal baaritaan oo lagu baadi-goobayo haweenayda la af-duubtay, taasoo la xaqiijinayo in loola soo tallaabay dhinaca Soomaaliya.
Safiirku, waxaa uu ugu dambayntii ka codsaday raggii qafaashay haweenaydaasi da?da ah in ay iska siidaayaan una soo celiyaan xorriyaddeeda iyagoo eegaya bani?aadanimada.
Dhinaca kale, wasiirka dalxiiska dalka Kenya Najiib Balal ayaa afduubka haweenaydan ku tilmaamay xad-gudub iyo weerar lagu soo qaaday dhulka Kenya. Waraysi uu siiyay hay?adda BBC-da ayuu ku sheegay in ay suuragal tahay in afduubka ay ku lug leeyihiin kooda Alshabab, waxna uu sheegay in dalkiisu ka fakarayo in ay tallaabo millatari ku galaan gudaha Soomaaliya.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa si aad ah u sii kordhayey cabsida iyo baqdinta laga qabo deegaannada loo tamashlaha tago ee dalka Kenya, kdib markii ay soo noqnoqdeen weerarada afduub ee ka yimaada dhinaca Soomaaliya. War ay maanta si wadajir ah u soo saareen Faransiiska iyo Ingiiska ayaa lagu sheegay in muwaadiniinta labadaasi dal ay ka digtoonaadaan u dalxiis tagidda xeebaha waqooyi ee Kenya.